ओलीे र ‘रअ’ प्रमुख अनिलबीच भेटवार्ता हुँदै ! विदेशी भूमिमा मात्रै भेट्‍न-यो कस्तो राष्ट्रवाद ? – Todays Nepal
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य जाँचको लागि भन्दै बुधबार दिउँसो बैंकक उडेका छन् । जहाजमा चढ्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओलीले अाफ्नो स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएको तर नियमित जाँचको लागि जान लागेको बताएका थिए ।
“अनमोलको दुई तीन जना गर्लफ्रेन्डलाई घरमै भात पकाएर खुवाएको छु”